ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်ဖြေဆိုခဲသည်။ သို့သော်ဟေး…ဒီဟာကကူညီခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ ငါ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်၊ အိုင်ဖုန်း၊ Droids နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်းများအလွန်များပြားလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမိုဘိုင်းဘရောက်ဇာတွင်အသုံးပြုရန်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်အချိန်ကျပြီဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကဖောက်သည်တစ် ဦး အတွက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့ပြီး၎င်းတို့တည်ဆောက်ခဲ့သောဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်း၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၎င်းနှင့် iPhone နှင့် Droid တွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံး။
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုခြင်းအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုမတတ်နိုင်နိုင်သော်လည်းချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုရှိသည် - သင်၏ဖုန်းနံပါတ်များကို hyperlink လုပ်ပါ မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများက၎င်းတို့ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ syntax အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်:
ပုံမှန် ကျောက်ဆူး tag ကို ဝက်ဘ်လင့်ခ်တစ်ခုသည်တန်ဖိုးရှိ URL တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်လင့်ခ်ကိုအသုံးပြုသည် Mailto... ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအတွက် syntax သည်ရိုးရှင်းပါသည် Tel။ ကွင်း၊ အချိန်ကာလနှင့် dash များမပါ ၀ င်သည့်တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။ iPhone နှင့် Droid နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းနံပါတ်ကို href တန်ဖိုးရှိအမှန်တကယ်နံပါတ်များနှင့်သာကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
Tags: href တယ်လီဖုန်းဖုန်းနံပါတ်အတွက် html ကုဒ်html ဖုန်းနံပါတ်html ဖုန်းနံပါတ်html ဖုန်း taghtml တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုhyperlink ဖုန်းနံပါတ်hyperlink ဖုန်းနံပါတ်များiphone ဖုန်းနံပါတ်link ဖုန်းနံပါတ်မိုဘိုင်း browsing linkမိုဘိုင်းလင့်ခ်နံပါတ် tagဖုန်း link htmlဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာ htmlဖုန်း taggingဖုန်း tagsမိုဘိုင်းနံပါတ်ကို tagလက်ကိုင်ဖုန်းကို tagမိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို tagမိုဘိုင်းဖုန်းများကို tagဖုန်းနံပါတ်ကို tagtagged ဖုန်းနံပါတ်တယ်လီဖုန်း link html
ပျက်ကွက်ခြင်း - အောင်မြင်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်
သြဂုတ် 25, 2010 မှာ 6: 48 AM
Genius Doug! ကျွန်ုပ်ဖောက်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားလုံးတွင်၎င်းကိုစတင်သုံးစွဲရန်စီစဉ်ပါ။ ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာငါတင်ရင်ကောင်းပြီလား ၏သင်တန်းကိုသင်အပြည့်အဝရေးသားသူပေးခြင်း။ အရမ်းအေးတယ်! 😎
6:2010 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 37 မှာ
ဒါကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာကွင်း၊ အချိန်ကာလ (သို့) မျဉ်းကြောင်းတွေမထည့်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။ ထို့အပြင် html ဖုန်းနံပါတ်သည်ခေါင်းစဉ် tag တစ်ခုကဲ့သို့ပြုမူနေပါသလား။ href ကုဒ်အတွင်းခေါင်းစဉ် tag လုပ်ခြင်းအတွက် SEO အကျိုးကျေးဇူးရှိပါသလား။
စက်တင်ဘာ 7, 2010 မှာ 7: 08 AM
@edeckers RFC3966 စံသည်ကွင်းပိတ်ကိုအထောက်အပံ့မပေးသော်လည်းနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု၊ တိုးချဲ့ခြင်းအစရှိသည့်အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်သင်္ကေတများကိုထောက်ပံ့သည်။
SEO ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တာလဲ။ စီးပွားရေးအမည် +“ ဖုန်းနံပါတ်” သည်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဧပြီ 5, 2011 မှာ 6: 33 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ။ ဒါကကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားပြီး Firefox က link ကိုဘယ်လိုဖတ်ရမှန်းမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းက link ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် desktop ပေါ်က link ကိုတစ်ယောက်ယောက်နှိပ်လိုက်ရင်မကောင်းတာကိုသတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Android ရှိဖုန်းနံပါတ်ကို“ ကြာရှည်စွာနှိပ်” ပါကနံပါတ်တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ဖုန်းခေါ်သည်။ ငါမှားလား? ပတ်ပတ်လည်အလုပ်ရှိပါသလား
26:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 9, 02
၎င်းသည်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူအတွက် In House ကိုသေချာပေါက်ပစ်မှတ်ထားသည်။
28:2013 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 46
သင်အမြဲတမ်း browser ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုမိုဘိုင်းမဟုတ်သော / ပိုကြီးသော resolution browser များအတွက်ဝှက်ထားသည့် div တစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါ။
ဧပြီ 11, 2011 မှာ 10: 48 pm တွင်
ဒီရည်ညွှန်း post ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug :)
14:2011 pm မှာဇွန် 11, 20
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ သင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ရိုးရှင်းသော်လည်းထိရောက် သင်တစ်စုံတစ်ရာသောခြေလှမ်းများနောက်သို့သွားပြီး၎င်းကိုအိုင်ကွန်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးသင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြသရန် anchor tag ထဲတွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုမောက်စ်ကိုမောက်စ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများအတွက်နောက်ထပ်လမ်းညွှန်ချက်များရှိသည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ!
စက်တင်ဘာ 28, 2011 မှာ 10: 35 AM
28:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 11 မှာ
href variable သည်နံပါတ်များကိုသာခွင့်ပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်၊ သို့သော်သင်မည်သည့်စာသားကိုမဆို anchor tag အတွင်း၌ထည့်နိုင်သည်။
မေလ 16, 2012 မှာ 4: 48 pm တွင်
ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ။ ငါယခုမှစ။ ဆိုဒ်များဤထည့်သွင်းစတင်သွားမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
22:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 05
ငါ 100% သေချာမသိဘူး (ပြီးတော့ဒါကတော်တော်လေးကိုဟောင်းနွမ်းတဲ့ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဟာကစိတ်မသက်မသာဖြစ်လိမ့်မယ်) ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်စမတ်ဖုန်းအများစုဟာဒီအတိုင်းပဲအလိုအလျောက်လုပ်နေကြတာမဟုတ်လား။
22:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 37
@ facebook-502306174: များစွာသောသူတို့သည် disqus လုပ်ကြသည်၊ သို့သော်သတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်လျှင်များစွာသောသူတို့သည်နံပါတ်အားမမှန်မကန်ပုံဖော်ကြသည်။
19:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 21
မတ်လ 31, 2015 မှာ 12: 22 pm တွင်
မင်းဆိုလိုတာကသေချာတာက“ အရာအားလုံးကိုသိမ်းထားပါ၊ အမှန်တကယ်နံပါတ်များ OUR တန်ဖိုးကိုသာထားပါ”
မတ်လ 31, 2015 မှာ 5: 43 pm တွင်
24:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 37
Douglas ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ Social Media Bar ဆိုတာဘာလဲ။ သင်၏ဘလော့ဂ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်၌များစွာသောအကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။ Google Plus တွင်ချိတ်ဆက်လိုသည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ
24:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 04
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒင်း! အလွန်ကောင်းသောဖြေရှင်းချက်အတွက်ကွန်ယက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်များစွာရှာဖွေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည် Shareaholic။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မသုံးသောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
14:2015 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 49
ဆဲလ်ဖုန်းသို့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမည်သို့အီးမေးလ်ပို့ရမည်ကိုဤကော်လံမှကျွန်ုပ်မသိသေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သူဌေးက၎င်းကို နှိပ်၍ ခေါ်နိုင်သည်။
15:2015 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 21
ဟိုင်းဒီ၊ သင်၏အီးမေးလ်ဆော့ဖ်ဝဲသည် HTML ကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် hyperlink ကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အီးမေးလ်မဟုတ်ဘဲမိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၌မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုပိုမိုဖော်ပြထားသည်။
5:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 11
ဟိုင်းဒေါက်ဂလပ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုသူများအတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (ဥပမာ +၄၄) နံပါတ် (သို့) ဒေသတွင်းကုဒ်နံပါတ်ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဟုသင်ထင်ပါသလား။
6:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 24
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဘင်လုပ်တာကဒါကအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုသူများသည်ဒေသlocalရိယာကုဒ်များကိုအသုံးပြုကြသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားလိမ်လည်မှုအနုပညာရှင်တွေချက်ချင်းစိတ်ထဲသို့ရောက်ကြ၏။ 🙂
20:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 32
မင်္ဂလာပါ၊ ဖုန်းခေါ်ရန်အတွက် hashtag ကို hyperlink အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ ငါကအခြားနေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြား၏ပေမယ့်မြင်ကြပြီမဟုတ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
20:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 51
ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမမြင်ရသေးဘူး ခင်ဗျားအနေနဲ့ plugin (သို့) script တစ်ခုခုကိုရေးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါက HTML HTML ရဲ့ဇာတိမဟုတ်ဘူး။
23:2015 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 46
Microsoft Publisher ကဲ့သို့သောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်တွင်“ ယခုဖုန်းခေါ်” ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။ ဒါ့အပြင်ဘယ်လို mailchimp သို့ထည့်သွင်းမလဲ
4:2015 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 07
ဒီတော့ငါထည့်သွင်းရန်မလိုအပ် - သို့မဟုတ်။ နံပါတ်များအကြား? ထို့အပြင် hyperlink သည် extension ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်မည့် extension ကိုသင်မည်သို့ထည့်သွင်းမည်နည်း။
4:2015 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 17
href တန်ဖိုးအတွင်း၊ နံပါတ်များအကြားရှိ dash များသို့မဟုတ်အစက်အပြောက်များကိုသင်မလိုချင်ပါ။ ကျောက်ဆူးစာသားထဲမှာသင်ဘာမှမရေးနိုင်။
မတ်လ 18, 2016 မှာ 6: 06 pm တွင်
ဆောင်းပါးကောင်း - အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေလ 25, 2016 မှာ 7: 02 AM
2:2016 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 59
စက်တင်ဘာ 19, 2016 မှာ 11: 05 AM
Great tip Doug! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၆ နှစ်ကြာပြီးနောက်အရာအားလုံးသည်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်။
သြဂုတ် 22, 2017 မှာ 2: 41 AM
အဆင်ပြေတယ်!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug !! 😉
17:2017 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 20
2:2019 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 06
အလွန်သိကောင်းစရာများသင်ခန်းစာ! တကယ်တော့ငါက“ နှိပ်လို့ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်” အစား“ click to call widget” ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် Callback Tracker plugin ကိုစမ်းသပ်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်အားခေါ်ဆိုခြင်းထက်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ရလဒ်များစွာကျွန်ုပ်မြင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကလိုအပ်သောအဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်များအများစုတွင်ကြည့်ရှု။ ဒီမှာ plugin နဲ့လင့်ခ်လုပ်ထားတယ် https://callbacktracker.com/plugins/wordpress-click-to-call-plugin-install-tutorial/
6:2019 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 08